आठ वर्षिया निर्देशकको ‘लभ यू बाबा’ हेर्नैपर्ने तीन कारण ! « Mazzako Online
आठ वर्षिया निर्देशकको ‘लभ यू बाबा’ हेर्नैपर्ने तीन कारण !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, मंसिर २६– आजबाट सार्वजनिक प्रदशर्नमा आएको फिल्म ‘लभ यू बाबा’ हेर्नका लागि धेरै दर्शक आतुर छन् । हप्ता हप्तामै हलहरुमा फिल्म लागिरहँदा पनि दर्शकलाई लभ यू बाबा हेर्नै पर्ने केहि कारण फिल्मका कलाकारहरुले बताएका छन्
फिल्म लभ यू बाबा कि कलाकार अशिष्मा नकर्मी र कोरियोग्राफि गम्भीर बिष्टसँग रेडियो अडियो मा गरीएको कुराकानीमा यो फिल्म हेर्नै पर्ने तिनकारण रहेको बताएका छन् । अन्य फिल्म र यस फिल्ममा के फरक छ ? के के कारण छन् लभ यू बाबा हेर्नै पर्ने भन्ने रेडियो अडियोको प्रश्नमा यसरी जवाफ दिन्छन् लभ यू बाबाका कलाकार :-
पहिलो हो आठ बर्षिय निर्देशक सौगात बिष्टद्धारा निर्देशीत फिल्म भएकोले । यस फिल्ममा विश्वमै सबैभन्दा कम उमेरका निर्देशकले निर्देशन गरेको फिल्म कस्तो होला भनेर दर्शकको मनमा एउटा जिज्ञासाको बिषय बनेको बताए ।
त्यस्तै दोस्रो कारण लभ यू बाबा लाई ८ बर्षको उमेरमै निर्देशन गरेका निर्देशक बिष्ट नेपाली हुन् , त्यसैले हामि नेपालीले गर्भ गर्ने कुरा रहेको बताइएको छ । निर्देशक सौगात बिष्टको गिनिज बुक अफ द वर्डमा नाम लेखाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
त्यस्तै तेस्रो कारण यो एउटा पारिवारीक फिल्म हो , यसमा आमा नहुँदा बाबुले छोरीलाई कसरी स्याहार गर्छन । बाबु छोरीको माया लाई देखाइएको छ ।
आठ चलचित्रमा अभिनय गरीसकेकी कलाकार अशिष्मा नकर्मीले आफुले अहिले सम्म अभिनय गरेका फिल्मभन्दा यो निकै पृथक र नयाँ अनुभव भएको बताएकी छिन् । त्यसतै सबै उमेरका दर्शकलाई एकचोटि हलसम्म पुगेर हेरीदिनुहुनका लागि अनुरोध समेत गरेकी छिन् । त्यसतै ३५ फिल्म भन्दा बढीमा कोरीयोग्राभ गरीसकेका कोरीयोग्राफि गम्भीर बिष्टले पनि यो फिल्म डान्स फिल्म भन्ने रुचाएका छन् । आफुले उधे्रको चोलीबाट कोरीयोग्राफि सुरुगरेको र आज सम्म आउँदा लभ यू बाबामा यसरी कोरीयोग्राफ गर्न पाउँदा साह्रै खुसिलागेको बताए ।
निर्देशक बिष्टका पिता गजित बिष्ट र दिदी संगम बिष्टको मुख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रमा निश्मा घिमिरे, अशिष्मा नकर्मी, बसन्त भट्ट, निर्मल शर्मा लगायतको पनि अभिनय छ । सम्झना पोख्रेल र रोशनी बज्राचार्यले चलचित्रमा लगानी गरेका छन् । चन्द्र पन्तको द्धन्द्ध र गम्भीर बिष्टको नृत्य रहेको चलचित्र दिब्यराज सुवेदीले खिचेका हुन् ।
फिल्म लभ यू बाबा मंसिर २६ गते बाट प्रदर्शनमा आउँदै छ ।